श्रीमान अप’हर’णमा ? हाम्रो बिचल्ली भयो भन्दै श्रीमती आइन् चितवन सन्तोषलाई भेट्न(भिडियो हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २३, २०७८ समय: १५:३९:१९
मानव बे’च’बि’ख’न अनि अ’प’ह’र’णका घटनाहरु हामी समाचार अनि पत्रपत्रिकामा सुन्न अनि देख्न पाइरहेका हुन्छौ । आजको विषय यस्तै एक अ’प’ह’र’णको घटनासग सम्बन्धित छ । बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ घर भएका तिलक बहादुर भारती गएको असोज ५ गतेबाट बे’प’त्ता छ्न । गीता भारती नाम गरेकि उनकी श्रीमतीले उनको श्रीमानको अ’प’ह’र’ण नै भएको बताउदै आएकीछिन ।
वैदेशिक रोजगारमा ३ बर्ष काम गरेपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए । अर्काको देशमा रगत पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै देशमा केही गरौ भन्ने भावनाका साथ उनी नेपाल फर्किएका थिए । तर यहा आएपछी उनले सोचेजस्तो भने केही भएन, बेरोजगारिको मारमा उनले बल्लतल्ल एउटा गोदाममा काम त पाए तर निकै जटिल भारी ओसारपोसार गर्ने ।
भक्तपुर जिल्ला थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ७ बोडेमा कामको शिलशिलामा उनी त्यही बस्ने गरेको कुरा उनका भाइले बताए । उनका अनुसार असोज ३ गते आइतबारका दिन ठुलोबुबा बित्नुभएकोले उहाकोमा जाने भन्दै फलफुल किनेर कोठामा राखेको तर त्यहाचाहिँ नगएको कुरा बताए । ४ गते बिहान फोन गर्दा भने एक्कासी पोखरा जादैछु भनेर घरमा फोन गरेको कुरा पनि उनले बताए ।
बास्तबमा उनी पोखरा पहिले बिदेशमा सगै काम गरेका राई साथिको लहैलहैमा गएका रहेछन । पोखरा पुगेपछी सम्पर्क पनि भएको रहेछ श्रीमान श्रीमतीबिच । यसो भनेका रहेछ्न श्रीमानले ” पि’र’चि’न्ता नलेउ म अहिले पोखरा आको छु मेरो राई साथिसग, बिदेशमा ३ बर्ष सगै बसेको साथी हो ।” होटेलमा काम मिलाइदिन्छु भनेर लगेको कुरा पनि उनका श्रीमानले बताएका रहेछन । आखिर कहाँ छ्न त उनी किन सम्पर्कबिहिन छन ? रु’दै श्रीमानको खोजिमा मिडियासमक्ष आइन श्रीमती ।बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा
Last Updated on: October 9th, 2021 at 3:39 pm